FAHATAPAHAN-JIRO: Hitondra vahaolana maharitra ny Ministeran’ny angovo sy ireo mpiara-miombon’antoka | Madatopinfo
Feno iray volana izay no nijoroan’ny Governemanta Ntsay Christian, hita soritra sahady ny fomba fiasan’ny Ministera tsirairay izay samy efa mandray ny andraikitra tandrify azy avy araka ny fanamby napetraky ny Filoham-pirenena Andry Nirina Rajoelina. Raha ho an’ny Ministeran’ny angovo sy ny rano ary ny akoranafo manokana, misy ny fanamarihana ny herinandron’ny angovo izay efa nanomboka ny alatsinainy 18 Febroary lasa teo hatramin’ny zoma ho avy izao etsy amin’ny Panorama Andrainarivo. Nanokatra ny lanona-panokafana izany ny Ministra Vonjy Andriamanga niaraka tamin’ireo mpiara-miasa aminy. Nandritra ny tafa nataony tamin’ny mpanao gazety dia nanamafy izy fa ao anatin’ny fikaroham-bahaolana tanteraka ny eo anivon’ny Ministera sahaniny amin’izao fotoana izao, miaraka amin’ireo mpandraharaha eo amin’ny sehatry ny angovo sy ny JIRAMA mikasika ny fahatapahan-jiro lavareny. Amin’ny zoma 22 Febroary ho avy izao noho izany no fantatra ireo fehin-kevitra voavolavola nandritra ny fikaonan-doha mikasika ny vahaolana maharitra amin’ny fahatapahan-jiro. “Mampijaly ny vahoaka amin’ny tsy fahandriampahalemana, ny asa aman-draharaha isan-karazany ny fisian’ny delestazy ka tsy maintsy hitadiavana vahaolana lavitr’ezaka”, hoy hatrany ny fanampi-panazavana nentin’ny Ministry ny angovo.
Raha ny eo anivon’ny orinasa JIRAMA kosa indray, nampitomboina avo roa heny ny solika ampiasain’izy ireo amin’ny foibem-pamokarana herinaratra mampiasa solika eto amin’ny tambazotra iraisan’Antananarivo. Raha 150 m3 izany teo aloha, 300 m3 kosa izany ankehitriny izay efa nampiharina nanomboka ny sabotsy teo ka tsy nisy intsony aloha ny fahatapahan-jiro raha mbola maro kosa ireo tanana hafa mbola iharan’izany manerana ny Nosy.
Araka ny fanampim-baovao voaray hatrany, tetikasa 45 no ezahina aparitaka eto Madagasikara ialana amin’ny delestazy raha 10 vaovao no hotanterahina amin’ity taona ity, indrindra ho an’ireo tanana tsy tafiditra ao anatin’ireo 45 ireo. Tsy miraviravy tanana noho izany ny Ministera manoloana ny olana sedrain’ny vahoaka fa avy hatrany dia mandray ny andraikiny.